Dhimashada 218 Qof Isbital Madiina oo xaqiijiyey iyo Wararkii ugu dambeeyey Qaraxii Muqdisho? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Dhimashada 218 Qof Isbital Madiina oo xaqiijiyey iyo Wararkii ugu dambeeyey Qaraxii...
Dhimashada 218 Qof Isbital Madiina oo xaqiijiyey iyo Wararkii ugu dambeeyey Qaraxii Muqdisho?
Magaalada Muqdisho maanta waxay isku badashay Murugo, Dhiig, Ooyin, Shaqo la’aan, dad nolol iyo geeri lagu la’yahay.
Tan iyo Shalay waxaa xiran Isgoyska Zoobe oo ah meesha uu qaraxaan ka dhacay, waxaana ilaa hadda socoto daadgureynta meydadka iyo raadinta dad nolol iyo geeri aan meel lagu sheegin.
Saacadihii ugu dambeeyey ee baaritaanka meydadka waxaa lasoo helay Shan qof oo meyd ah kuwaas oo aan la kala garan karin waxa ay kala yihiin dumar iyo rag, maadaama ay isku riiqmeyn.
Sidoo kale waxaa lasoo helay 5 qof oo nool, 4 rag iyo 1 nin ah, kuwaas oo ilaa shalay ku xayirnaa dhismooyin ku kor dumay.
Isbitaalada Magaalada Muqdisho ayaa la ciir ciirayo dhaawaca iyo meydadka, waxaana jiro ilaa hadda meydad la kala garan la’yahay inay yihiin rag iyo dumar iska dhaaf in qof ahaan loo aqoonsado.
Hadaad booqato Isbitaalada Magaalada Muqdisho, waxaad soo arkeysaa qoysas badan oo kuu sheegayo inay dadkooda la’yihiin ilaa hadda, isla markaasna aysan kala xaqiisan karin Nolol, Geeri iyo dhaawac midna.
Musiibada ugu weyn ee meeshaas ka dhacday weliba hal qoys saameysay ayaa aheyd markii ay geeriyoodeen 4 wiil oo isla dhalatay iyo Gabar uu qabay wiil la dhashay oo ka badbaaday qaraxaas kadib markii uu wax yar ka hor qolka ay ku dhinteen uu kasoo baxay.
Sidoo kale Waxaa ku dhintay Farmashiiyo ku dhaganaa Hotel Safari wiil iyo aabihiis oo isla iibinayey Daawooyinka.
Qoysaska Muqdisho ku sugan dhammaantood si isku mid ah ayey u saameysay musiibadaan, qofka ugu yar oo aysan saameyn musiibadaan, wuxuu dareemayaa dareen qiiro ku dheehan tahay iyo sida looga xumaaday waxa meeshaas ka dhacay oo ah musiibadii ugu adkeyd oo ku habsato Shacabka Soomaaliyeed.
Dhimashada ilaa hadda la xaqiijiyey kor waxay u dhaafeysaa ilaa 218 Qof sida ay xaqiijiyeen Maamulka Isbitaalka Madiino kadib tiro koob ay sameeyeen, halka dhaawacana uu ka badan yahay ilaa 200 oo kale.
Sidoo kale ilaa hadda lama xaqiijiyey dhimashada iyo dhaawacyada la geeyey Isbitaalada kale ee Muqdisho, waxaana macquul ah in Dhimashada iyo Dhaawaca ay intaas ka bataan.
Ma jiro Isbitaal ku yaal Muqdisho oo aan la geyn dhaawacyadii ka dhashay qaraxaas, waxaana isbitaalada qaar buuxsamay saririhii la saari lahaa dhaawacyada.
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ayaa Shacabka Muqdisho ugu baaqay inay isugu soo baxaan jidadka Muqdisho si loo muujiyo sida looga xun yahay Musiibadii ay Al-Shabaab ka geysteen Muqdisho.
Madaxweynaha iyo Ra’isulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa booqday Isbitaalada Degfeer iyo Madino, wuxuuna muujiyeen inay aad uga xun yihiin wixii ka dhacay Soobe ayna aheyd Musiibo ku dhacday Shacabka Soomaaliyeed.
Dadka Muqdisho ayaa maalintii Shalay aheyd 14/10/2017 u aqoonsaday inay tahay maalin Madoow oo soo martay Shacabka Soomaaliyeed.